Igodo na ntuziaka iji zụrụ smartwatch zuru oke maka gị | Akụkọ akụrụngwa
Ọnwa ole na ole gara aga na ụfọdụ afọ, ndị smartwatches ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ smart ese. Mgbe ọtụtụ obi abụọ mbụ, o yiri ka ha jisiri ike guzosie ike n'ahịa ma ọtụtụ ndị mmadụ na-eyi otu na nkwojiaka ha, na-erigbu ọrụ na nhọrọ ha nyere anyị kachasị.
Ọnụ ọgụgụ nke ụdị dị maka ịzụta amụbaala nke ukwuu ma ọ bụrụ na ọnwa ole na ole gara aga anyị nwere ike ịhọrọ naanị ụdị iri na abụọ, ugbu a ihe isi ike dị n'inweta smartwatch amụbaala nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-achọ otu n'ime ngwaọrụ ndị a ị ga-eyi na nkwojiaka gị taa anyị ga-enyere gị aka na a usoro nke ndụmọdụ na-adọrọ mmasị maka ịzụrụ n'enweghị nsogbu ma nweta ya.
Tupu ịbanye n'ime ezigbo ndụmọdụ maka inweta smartwatch ọhụrụ gị, anyị ga-agwa gị na ọ dị mkpa ịzụta na-enweghị ngwa ngwa ma ghara ịhọrọ ngwaọrụ mbụ anyị masịrị n'ihi atụmatụ ya ma ọ bụ ọnụahịa ya. Na ọ bụghị na ngwaọrụ niile nke ụdị a nwere ike dakọtara na ekwentị ọhụrụ ma ọ bụ bụrụ ihe anyị na-achọ, dabere na mkpa anyị.
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ igwe elekere mara mma, closeaa ntị na ndụmọdụ anyị ga-egosi gị n'okpuru, ma ọ bụrụ na itinye ha n'ọrụ ma soro ha n'ụzọ ziri ezi, ị ga-enwerịrị ike mgbe ịzụrụ ngwaọrụ ọhụrụ gị.
1 Choo smartwatch nke dakọtara na ama gị
2 Buru n'uche ihe ị ga-enye ya
3 Standalone smartwatches
4 Design, ngosipụta na njikwa
5 Ahịa na Batrị
6 Mkpebi kpamkpam
Choo smartwatch nke dakọtara na ama gị
Ruo taa, ọ bụghị ihe niile lsmartwatches rere n'ahịa dakọtara na ngwaọrụ mkpanaka niile. Ihe omuma atu doro anya bu Apple Watch, otu n’ime igwe nlere anya kacha mma n’uwa nile, na n’agbanyeghi otu o masiri gi, ma oburu na inwere smartphone nwere sistemu gam akporo, igaghi enwe ike inwe ya, nihi na ọ gaghị enye gị ohere karịa ịlele oge.
Maka oge dị mkpirikpi, ọ ga-ekwe omume iji smartwatches na sistemụ arụmọrụ gam akporo na iOS ma ọ bụ ihe dị na iPhone. Ha anaghị enye anyị otu ụzọ ahụ dị na gam akporo, mana ha na-arụ ọrụ ma dịka anyị nwere ike ịmata, Google na-arụ ọrụ nke ọma iji meziwanye ohere nke Adroid Wear ngwaọrụ na ngwaọrụ Apple.
Android Wear: Na-arụ ọrụ na Android 4.3 ma ọ bụ karịa na iOS 8.2 ma ọ bụ elu smartphones
Na-ekiri OS: Na-arụ ọrụ na iOS 8.2 ma ọ bụ karịa
Tizen: dakọtara na ọtụtụ Samsung smartphones na ụdị gam akporo dị iche iche dị ka Asus ZenFone 2, HTC One M9 ma ọ bụ Huawei P8
Ndị a bụ sistemụ arụmọrụ kachasị ewu ewu, mana ụfọdụ ndị nrụpụta echepụtala sọftụwia nke ha, dịka Garmin ma ọ bụ SPC. N'okwu ndị a, ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka na ahịa dakọtara, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ukwuu iji jide n'aka tupu ịmalite ịzụta igwe elekere.
Na mgbakwunye, na ịkwụsị ngalaba a, ọ dị mkpa iburu n'uche ụdị njikọ nke ngwaọrụ mkpanaka gị nwere yana nke ahụ bụ asmartwatches niile dị n'ahịa chọrọ bluetooh iji mekọrịta ya na smartphone. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ọtụtụ wearables jikọọ site na Bluetooth 4.0, yabụ ọ bụrụ na ọnụ gị nwere Bluetooth 2.1 ị gaghị enwe ike ịmekọrịta ya na nsogbu nke a na-eche.
Buru n'uche ihe ị ga-enye ya
Dabere na ịba uru ị ga-enye smartwatch nke ị na-eche ịzụrụ, ịkwesịrị ịdabere na otu ma ọ bụ nke ọzọ. Ma ọ bụghị otu na ịchọrọ iyi ya ma chọpụta ọkwa site n'oge ruo n'oge, karịa ịchọrọ ya igwu egwuregwu ma ọ bụ ịbụ enyi na-enweghị ike ịhapụ gị n'ụbọchị, mgbe ị na - enweghị ike ma ọ bụ wepụ iwepụ ekwentị gị ka ị kpọtụrụ ya .
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka smart elekere iji mgbe anyị na-eme egwuregwu anyị nwere ike ịdabere na ngwaọrụ abụọ akpan mere maka nke a, Moto 360 Egwuregwu ma ọ bụ Samsung Gear S2 Egwuregwu. Nhọrọ ọzọ dị mma ga-abụ Egwuregwu Apple Watch, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ naghị atụ aro ya nke ukwuu n'ihi nhazi ya na ọkachasị ọnụahịa ya.
E nwekwara smartwatches na ahịa gbakwasara tumadi na omume nke egwuregwu, nke ụfọdụ ga-agaghị agwa anyị nke WhatsApp ozi natara, ma nke ga-enye anyị a nnukwu ego nke data banyere anyị nkịtị ọrụ.
Ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ smartwatch kwa ụbọchị iji lelee oge, ozi ịntanetị gị ma nwee ike ịchịkwa ngwaọrụ mkpanaka gị, nhọrọ dị oke.
Ihe ọtụtụ n’ime anyị ga-achọ inwe bụ a kpamkpam onwe smartwatch, nke nwere ike ịrụ ọrụ n'ụzọ zuru oke na-enweghị smartphone. Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-eche na ọ dịghị adị, ọ bụ ụgha kpamkpam, yana agbanyeghị na enwere ngwaọrụ ole na ole nke ụdị a, enwere ụfọdụ na ahịa.
El Samsung Gear S ma ọ bụ LG Watch Urbane mbipụta nke abụọ LTE Ha bụ elekere amamịghe abụọ na-arụ ọrụ n'ụzọ kwụpụrụ iche na ekwentị anyị. Na ha ị nwere ike ịme ma nata oku, zaa ọkwa ma ọ bụ sọọfụ na withoutntanetị na-enweghị mkpa ijikọ ekwentị anyị.
Ihe bụ nsogbu bụ anyị ga-enwerịrị kaadị SIM maka smartwatch anyị Ebe ọ bụ na ịnwe gbanwere kaadị n'etiti ekwentị anyị na igwe elekere anyị bụ nnukwu oge.
Design, ngosipụta na njikwa
N'ahịa taa a na-ere ọtụtụ elekere smart, site na ndị nrụpụta dị iche iche na nke ọ bụla nwere ụdị dị iche. N’oge gara aga, ọtụtụ ngwaọrụ nwere ihe eji arụ ọrụ nke dọtara uche, ọ kachasị n’ihi adịghị ike ya. Otú ọ dị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ọtụtụ smartwatches ejirila nụchaa.
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n’ime ngwa ndị a nwere kọmpụta okirikiri, yana eriri ndị mara mma ma yie elekere ọdịnala anya. The Huawei Watch, Gear S2 ma ọ bụ Moto 360 bụ ihe atụ doro anya nke 3 smartwatches nwere nhazi nke ga-adọta uche onye ọ bụla.
Ihe ntakịrị jikọtara ya na imewe ahụ bụ ihuenyo ahụ, nke anaghị adịkarị oke ma dabere na ngwaọrụ ọ ga-enwe akụkụ anọ, akụkụ anọ ma ọ bụ okirikiri. Dabere na ihe ị na-achọ ma ọ bụ chọrọ, ị kwesịrị ị na-adabere kwupụta otu ngwaọrụ ma ọ bụ ọzọ.
N'ikpeazụ, mgbe ị na-azụta smartwatch, anyị ga-eburu n'uche njikwa ya. N'ime echiche nke onwe m, echere m na ọ nweghị smart elekere dị mgbagwoju anya ijikwa na-ere n'ahịa ugbu a. Imirikiti smartwatches, ma ọ bụ sitere na Motorola, Samsung ma ọ bụ Pebble, nwere nghọta, ha dịkwa mfe ịrụ ọrụ. Maka ihe a niile, ị gaghị atụ ụjọ ebe ọ ga - ewe gị ogologo oge iji jikwaa smartwatch ọhụrụ gị dịka ezigbo ọkachamara.
Ahịa na Batrị
N'ikpeazụ mgbe ịzụrụ smartwatch Anyị kwesịrị iburu n'uche ọnụahịa ahụ, ebe ọ bụ na e nwere ngwaọrụ dị na ahịa nke sitere na euro 20 ma ọ bụ 30 ruo euro 18.400 nke bara uru kasịnụ nke Apple Watch.
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ elekere anya na-agakarị na euro 100 na 300, n'agbanyeghị na ụfọdụ na-apụ na mpaghara a ma ọ bụ karịa ma ọ bụ n'okpuru. Ego ole anyị ga-eji wee zụta ihe ịga nke ọma na ịzụta siri ike ịmata, ọ ga-adaberekwa na mmefu ego nke ọ bụla nwere.
Na mgbakwunye na ọnụahịa ahụ, anyị ga-eburu n'uche batrị nke smartwatch ga-enye anyị na nke ahụ bụ, n'echiche m, ịkwanye ngwaọrụ ndị a kwa ụbọchị bụ ezigbo nsogbu. A ga-akwụ ụgwọ ọ bụla smartwatch na Wear gam akporo fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, ebe ndị nwere akara Pebble nwere ike iji na-enweghị akwụ ụgwọ ihe dị ka otu izu.
Enwetụbeghị m nnukwu onye nkwado ma ọ bụ onye hụrụ smartwatches n'anya, mana Ekwesịrị m ikwupụta na site na oge na mgbanwe na mgbanwe mgbanwe nke ụdị ngwaọrụ ndị a, ha mechara bụrụ ihe dị mkpa na ndụ m kwa ụbọchị.
Enwere m smartwatches abụọ m na-eji dabere na ụbọchị na ihe m ga-eme. M họọrọ ha abụọ na-echebara atụmatụ ha echiche na karịsịa batrị ha. Smartwatch mbụ m hụrụ n'anya bụ Pebble, n'ihi batrị ya na n'ihi na enwere ya oke ego na ọ gaghị ekwe omume ịzụta ya. M na-eji ya kwa ụbọchị iji chọpụta ọkwa niile ma enwere m ike ichefu batrị ọ hapụrụ ma ọ ga-ewe karịa ụbọchị 5 n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Maka ụbọchị pụrụ iche ma ọ bụ ndị nke ezinụlọ m na-ezukọ ma ọ bụ rie nri m nwere Huawei Watch, nke bụ otu n'ime akụ m kachasị mma. Site na imepụta mara mma, batrị nke ruru ọrụ ahụ na ụfọdụ nhọrọ na ọrụ na-atọ ụtọ nke ukwuu, smartwatch a emeela ka m nwee ịhụnanya site na ụbọchị mbụ wee gaa n'ihu na-ahụ n'anya oge ọ bụla m na-eyi ya.
Onye obula aghaghi ido anya nke oma banyere ihe ichoro ma obu mgbe ozo igha eji igwe elekere anya. Ọ bụrụ na ịmeghị egwuregwu, ọ baghị uru ịzụta smartwatch metụtara egwuregwu. Ọ bụrụ na ịkwụsịghị n'ụlọ ọzọ karịa ihi ụra, ịchọrọ onye nwere ọtụtụ batrị. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-eji ejiji n'ụzọ dịtụ iche, ọ baghị uru itinye Huawei Watch nke nwere ike ịdị oke mma.
Kedu ihe ị dabere na ịzụta smartwatch gị?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Igodo na ntuzi zụta smartwatch zuru oke maka gị
Ndụmọdụ 10 iji bụrụ ezigbo kpakpando Instagram